Talooyinka Apple Music Times
. Talooyin adeegyada .
Apple Music waa ugu dambeeyay ee adeega geeyo music bilowday shirkadda Timid soo diyaariyeen ah muuqaalada in aad waayo-aragnimo dhegaysiga muusikada mid xiiso leh. Adeeggu wuxuu user awood u leeyahay in uu doorto song ee ay doortaan oo u sii qulquli in ay qalab. Adeegga Apple Music waa la jaan qaada oo dhan qalabka Apple socda ee macruufka 8.4 iyo qoraalkii ka dib iyo Lugood 12.2 iyo qoraalkii ka dib. Wixii muddada tijaabo hore adeegga waa bilaash, halka in ka dib waa inaad bixiso lacagta rukun ah. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah la siiyey talooyin ah ee Times music inankeeda.
1. Sida loo qori music tufaaxa?
iPhone, iPad iyo iPod
Tubada on app Music iyo marka aad furto markii app hore oo kale, waxaad ka heli doontaa fariin ka Apple. oo haddii aadan samayn, markaas garaac "Waxaad ku saabsan" xagga hoose ee shaashadda ah
Hadda ka jaftaa 3-bilood maxkamad ikhtiyaarka xorta ah
Dooro Xubin doorasho ka dibna tubbada Next
Ku qor ID Apple iyo password, mid ka mid ah oo aad u isticmaali u Lugood Store, haddii la weydiiyo iyo in la abuuro xisaabtaada
Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad u ansixinta aad info biilasha. Riix biir ka dib isagoo intaa ku daray habka lacag bixinta ah.
Ku heshiiya in shuruudaha iyo xaalada
Mac ama PC
Fur nooca ugu dambeeya ee Lugood
Riix Music icon on geeska bidix ee sare
Riix Waayo, waxaad dusheeda
Hadda riix 3-bilood maxkamad ikhtiyaarka xorta ah
2. Maaraynta Apple Music Times
Maareynta Times aad waa wax fudud oo halkan waxaan kuu sheegi sida loo la mid ah sameeyo,
Settings Apple Music Library
Iyada oo xubin ka Apple Music, aad ku raaxaysan kartaa maktabadda music guud ahaan qalabka aad. Waxaad ka heli maktabadda My Music in ka mid ah heesaha oo dhan iyo raad aad soo iibsatay ka Lugood Store iyo wax kasta oo kale ka qalab aad ka yar.
Daar aad iCloud Library si ay u dar music inay Apple Music Library.
Saxiix in la ID Apple iyo password aad ka dib markii laga faaiidaysanayo on Apple Music app
Daar iCloud Library hoos music gooba
Music jooga qalab aad lagu dari lahaa haddii aad ku sawirnaa on 'midowdo'. Music qalabka loo bedeli lahaa haddii aad ku sawirnaa on 'beddel'
Fur Lugood iyo saxiixa in la ID Apple aad
Daar iCloud ka bar menu hoos doorashada ay dhacdo Mac.
3. Sidee loo damiyo cusboonaysiinta si toos ah si ay u baajiso xubin?
Dami 'cusboonaysiinta si toos ah' si ay u baajiso xubin aad.
1. Tubada icon profile ka dib markii ay app music ah
2. Tubada 'aragtida ID Apple'
3. Tubada 'maamuli' hoos Times iyo hubi fursadaha xubin aad haddii aad leedahay wax ka badan hal Times
4. Dami 'Automatic Renewal' hoos Renewal Options. Tubada 'qabtay' si loo xaqiijiyo doorashada
Dooro info Account ka dib markii gujinaya magacaaga iyo geli password
Tag goobaha markaas ku dhufo "maareeyo 'saxda ah ee The Times.
Waxaa jira 'OFF' doorasho si xaq ah Automatic Renewal. Riix oo markii la weydiiyay in uu xaqiijiyo click on "dami '
Ku noqo xisaabta Information adigoo gujinaya 'qabtay' iyo Lugood Store adigoo gujinaya 'qabtay' mar kale
4. Sida loo Cancel Apple Music Times?
Marka aad heshiiska u Music Apple, waxaad joojin kartaa Times aad by deminta Automatic Renewal si la mid ah sida kor ku xusan.
5. Noocyada Apple Music Times
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah rukun waxaad dooran kartaa iyo hoos waa faahfaahinta la mid ah:
In Times xubin kaliya aad u baahan tahay in ay bixiyaan $ 9.99 bil ah, kaas oo u ogolaanaya isagoo dhammaystiran u helaan music maktabadda Apple ee, talooyinka khabiir, ka qaadataan Apple ee music ugu dambeeyay qashanka aan xad lahayn oo ku saabsan idaacadaha Apple ee.
Sidoo kale waxaa jira qorshe Times qoyska halkaas oo aad bixin doonto $14.99 bishii markaana ay u helaan music aan xad lahayn oo ilaa 6 xubnood oo ka tirsan qoyska, oo ay iibsadaan dukaamada itune iyo Apple. Sharing Group Qoyska baahan yahay in la Abuuray iyo 5 xubnood oo la doortay u baahan tahay in lagu martiqaado inay ku soo biiraan kooxda. Waxaa jira qabanqaabiyaha ah oo Ogolaaday in uu bixiyo wax gadashada ee dukaamada itune iyo Apple oo uu yahay qofka u baahan yahay si ay ugu yeedhi dadka kale. Marka xubnaha ku soo biiraan iyo kooxda loo abuuray, qaababka qoyska Wadaaga ayaa lagu wadaa in si toos ah qalab qof walba. Goobaha la wadaago karo iyo iyada oo taasi, qalabka xitaa maqan si fudud loo ogan karo.
Download Pandora Radio u Android
Sida loo aqoonsado Music 3 Music Aqoonsiga Apps
> Resource > Music > Talooyin Apple Music Times